ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ အား မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kim Sok Chol ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှ ယနေ့နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရည်ရှည် တည်တံ့စွာ ဆက်ဆံနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး စသည့်တို့ကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာနှင့်အတူ လွှတ်တော် အခွင့်အရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ဆန်း၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ထွန်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kim Sok Chol နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ကြပါသည်။ (သတင်းစဉ်)